Raysalwasaaraha Dalka Mauritius Oo Somaliland Ku Cambaareeyay Maxaabiistii Budhcad Badeeda Ee Uu Madaxweyne Biixi Cafiyay | Salaan Media
Raysalwasaaraha Dalka Mauritius Oo Somaliland Ku Cambaareeyay Maxaabiistii Budhcad Badeeda Ee Uu Madaxweyne Biixi Cafiyay
August 31, 2019 | Published by: admin
Hargaysa (Salaanmedia.com/ W.Wararka)-Raysalwasaraha dalka Mauritius Pravind Jugnauth, ayaa dawladda Somaliland ku cambaareeyay 19 maxbuus oo ahaa budhcad badeed oo ku xidhnaa xabsiyada Somaliland oo uu Madaxweyne Biixi dhawaan ku sii daayay cafis Madaxweyne.
Raysalwasaare Pravind, ayaa hadalkan ka sheegay ka dib kulan uu khamiistii magaalada Yokohama ee dalka Japan kula yeeshay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres, waxaanu Raysalwasaaruhu sheegay inuu aad uga walaacsanyahay sii daynta maxaabiistaas, “oo ay ahayd.” Ayuu yidhi “Inay xabsiyadooda ku dhammaystaan Somaliland.”
Maxaabiistan oo ku xukunayd xadhig u dhexeeya 30 ilaa 42 sanandood, ayuu sii dayntooda ku tilmaamay xad gudub sharci oo ay Somaliland samaysay, waxaanu sheegay inuu xoghayaha guud iyo golaha ammaanka ku gudbiyay sida ay dawladiisu uga xumaatay sii daynta maxaabiistaas.
Geesta kale wasiirka arrimaha dibadda, is dhex galka gobalka iyo ganacsiga caalamiga ah ee dalkaas Mauritius Mr. Mr Nandcoomar Bodha oo magaalada caasimadda dlakaas ee Port-Louis ku qabtay kulan lagaga hadlayay shirka kooxda The Contact Group on Piracy Off the Coast of Somalia CGPCS, ayaa wuxuu cambaareeyay sii daynta maxaabiistan.
Warsaxaafadeed laga soo saaray kulankaas ayaa wuxuu Wasiirkani sheegay in maxaabiistaas la sii daayay iyagoo aan xukunkoodii dhammaystiran taas oo uu ku tilmaamay sharci darro, waxaanu sheegay in sii daynta maxaabiistani ay khatar gelinayso dedaalada la dagaalanka budhcad badeeda, waxaanu intaas raaciyay in xadhiga, xukumista iyo xabsiyayntu ay ka qayb qaadatay yaraynta budhcad badeeda Soomaalida.
Wuxuu Wasiir Bodha, intaas ku daray inay golaha ammaanka iyo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u gudbiyeen qorshe lagaga hortagayo in si fudud lagu sii daayo budhcad badeeda ls oo qabto ee la xukumo. Sidoo kale wuxuu sheegay in maamulka Puntland uu isna sii daayay 30 budhcad badeed ah.
Maxaabiistan uu Madaxweyne Biixi sii daayay ayaa lagu xukumay dalka Seycheles , waxase loo soo wareejiyay Somaliland si ay xabsiyadooda ugu dhammaystaan, ka dib markii ay xukuumadii Madaxweyne Siilaanyo heshiis la gashay dwladda Seycheles .
Dawladda Seychelles ayaa hore dawladda Somaliland ugu cambaaraysay sii daynta maxaabiistan oo ay sheegtay inuu ka hor imanayo oo aanu waafaqsanayn heshiis ay hore u wada galeen Somaliland iyo Seychelles.